mars | 2020 | InfoKmada | Page 2
Antsirabe : miisa 30 ireo olona arahi-maso akaiky ny fahasalamany
InfoKmada - 30 mars 2020 0
Mitohy hatrany ny asa sahanin’ny Centre operationnel ao Vakinankaratra. Miisa 30 ireo olona arahi-maso akaiky ny fahasalamany mandritra ny 14 andro . Tsy mbola misy hatreto ny olona voan’ny valan’aretina ao Vakinankaratra.
29 Mars 1947 : feno 73 taona androany
Feno 73 taona androany ny fahatsiarovana ny tolom-panavotana nataon’ny Malagasy ny taona 1947. Manoloana ny fisian’ny valan’aretina Coronavirus, natao tsotra nefa mendrika ny fahatsiarovana tamin’ireo toerana tokony hanatanterahana izany.
Mpampanofa vatana : tsy mbola nahazo ny fanampiana avy amin’ny fitondram-panjakana
InfoKmada - 27 mars 2020 0
Tsy mbola nahazo ny fanampiana avy amin’ny tomponandraikitra ireo mpampanofa vatana teto andrenivohitra ho an’ny androany alakamisy. Antony mahatonga izany ny fisian’ny fandaminana mikasika izany, eo ihany koa ny fanangonana ireo anarana sy ny taratasy manamarina ireo mpampanofa vatana ireo.
Covid-19 : niampy 4 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina
Hatramin’ny 1 ora tolak’andron’ny 26 martsa 2020 teo, nitombo 4 indray ireo olona voamarina fa tratry ny Covid-19, araka izany niakatra 23 ny isan’ny olona nahitana ny valan’aretina Covid-19 tao anatin’ny 3 andro.
Antananarivo : faritra 6 nametrahana toeram-pamatsiam-bary ho an’ny mpaninjara
Faritra 6 eto Antananarivo sy ny manodidina no nanombohan’ny minisiteran’ny varotra sy ny indostria ny fametrahana toeram-pamatsiana vary manakaiky ny mpaninjara. Afaka manantona izany avokoa ny tsena kely manara-dalàna amin’ny fokontany manodidina. Ferana 1750 hatramin’ny 1800 ariary ankilany ny kilao hamarotana ny vary amin’ny mpanjifa.
Grevy Toamasina : polisy iray naratra, mpanao gazety iray voatoraka
Nidina andalambe ireto mpitondra posy bicyclette ao Toamasina noho ny tsy fahafahan'izy miasa isan'andro mamelona ny vady aman-janany. Nangataka izy ireo mba ahhafahany miasa na dia mitondra olona iray isaky ny mandeha hitsinjovana ny fahasalaman'ny tsirairay. Vokatr’izay, Polisy iray no naratra voatora-bato, Mpanao gazety iray voatoraka fa tsy naratra.
COVID 19 : Tonga ny fitaovana sy fanafody ho an’i faritra Vakinankaratra
Tonga ny fitaovana sy fanafody ho an’i faritra Vakinankaratra, hampiasaina mandritra ny vanim-potoana hiadina amin’ny COVID-19. Nisy ihany koa ny fepetra hentitra noraisina mahakasika ny fiara fitanteram-bahoaka mihazo ny faritra vakinanakaratra.
« Equipements Médicaux » : tonga omaly hariva teny Ivato
Omaly ariva no nigadona teny amin’ny seranam-piara-manidina Ivato ireo Equipements Médicaux entina hisorohana ny fiparitahan’ny valan’aretina Covid-19. Fanampiana avy amin’ny fikambanan’ilay teratany sinoa Jack Ma hoan’ny firenena aty Afrika. Ary i Madagasikara isan’ireo nisitraka izany, ny filohampirenena sy ny solontenan’ny OMS no nitsena izany teny an-toerana.
Valan’aretina Coronavirus : mila hamafisina ny fanentanana sy ny fampahafantarana
Maro amin’ireo olona eny amin’ny tontolo ambanivohitra no tsy mahalala ny valan’aretina Coronavirus, ny fisehony sy ny fisorohana tokony atao. Manolona izany, tokony hamafisina ny fanentanana sy ny fampahafantarana amin’ny alalan’ny haino aman-jery sy peta-drindrina.
Taom-baovao Malagasy 2020 : ankalazaina androany
InfoKmada - 26 mars 2020 0
Androany 25 Martsa 2020 no ankalazana ny taom-baovao Malagasy. Ankoatry ny fiarahabana sy ny firarian-tsoa, fangatahana ny fiaraha-mientan’ny rehetra, indrindra amin’izao toe-java-misy eto amin’ny firenena izao no tena zava-dehibe. « Malagasy manaja ny fomba, hasina ho an’ny rehetra» araka ny lohahevitra hobanjinina amin’ity taona ity.